Xisbiyada S iyo SD oo guulo ka gaarey doorashadii golayaasha kaniisadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiyada S iyo SD oo guulo ka gaarey doorashadii golayaasha kaniisadda
La daabacay måndag 16 september 2013 kl 14.51
Waxaa maalintii axadda Iswiidhen lagu qabtay doorashadii golayaasha kaniisadda. Waxaana ku loolamayey xisbiyada dalka ka jira iyo xisbiyo kale oo madax-bannaan. Waxaana codkooda dhiibtey tiro gaareysa boqolkiiba 12.7 dadka xaqa u leh in ay codeeyaan doorashooyinka golayaasha kaniisadda Iswiidhen. Xooga ayey kor uga kacday tiradii codka bixisay sannadkii 2009, taasi oo ahayd boqolkiiba 11.9.
Doorashadaan waxaa natiijo wanaagsan ka gaaray xisbiyada Dimoqraadiyiinta Iswiidhen (SD), Sooshiyaal-dimoqraadiga (S) iyo urur siyaasadda xisbiyada ka madax-bannaan oo lagu magacaabo POSK, halka ay xisbiyada midigtu gadaal u gurteen. Xisbiga SD wuxuu helay boqolkiiba 6 codkii la bixiyey, taas oo siineysa 15 kursi. Tirada kursiyada uu xisbigaani ka helay doorashadii 2009 waxay ahayd 7 kursi.
Xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga ayaa isaguna helay boqolkiiba 29 oo u dhigma 73 kursi, halka uu ururka madaxa bannaan ee POSK helay 15.3 boqolkiiba ama 38 kursi.
Waxaa doorashada ka hor aad loo hadal hayey labo su’aalood, kuwaas oo kala ah haddii xisbiga SD uu natiijo ka keenayo dadaalka ku jirey iyo haddii uu wax saameyn ah yeelanaayo filinkii doodda badan dhaliyey ee loogu magacdaray Nebi Ciise wuxuu ahaa Sooshiyaal-dimoqraad, kaas oo qayb ka ahaa ololaha ururka dhallinyarada ee Sooshiyaal-dimoqraadiga oo loo gaabiyo SSU.
Sabab weyn oo kordhisay xiisaha loo hayo doorashada golayaasha kaniisadda ayaa ahayd xisbiga SD oo taageerayaashiisa ugu baaqay in ay codkooda dhiibtaan. Taasina waxay keentay in dad badan oo siyaasadahooda diiddan ay go’aansadaan in ay codeeyaan.
Isha: TT, Nyheter P4 Halland iyo Ekot